> Resource > Ladnaansho > kaabta iyo Soo Celinta Motorola Moto X fudayd
Ma ogaan kartid marka aad ku dhammaan karaan inay kula dhibaato aad Motorola Moto X iyo khasaare xogta. Mararka qaarkood, waxaad si qalad ah qaab laga yaabaa in aad Moto X ama tirtirto xog qiimo leh waxaa ku. Ama, adiga Moto X ama la xado waa la dumiyey, laakiin nasiib daro adiga oo aan xoojiyaa aad Moto X. Or, aad rabto in aad ka rujin aad Moto X, celin default warshad iyo kuwa kale. Waxyaalahan oo dhan ayaa ku soo gaartay ah oo xog weyn. Si ay iyaga ugu soo celiyaan fogaado ama xogta ka dib markii si deg deg ah, waa fikrad wanaagsan in aad ka dhigi gurmad ah ee caadiga ah ee aad Moto X.
Sida aad u samayn gurmad aad Motorola Moto X iyo soo celin marka u baahan? Dhab ahaantii. Waxaa tahay qof xirfad leh qalab badan cid saddexaad soo samayn kartaa in aad u. Ka mid ah, ka Wondershare MobileGo for Android taagan. Waa tababare sahlan in la isticmaalo Android, kuwaas oo raad raac fiican - & - celin shaqada. Iyada oo ay caawimo, awoodo gurmad dhammaan dadka ay khuseyso, barnaamijyadooda, videos, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka taariikhda, music, sawiro iyo info playlist in deggan on your Moto X kombiyuutarka ee 1 click aad. Mar kasta oo aad ka maqnaan xogta sababo la garanayo ama aan la garanayn, waxaad u soo celin kartaa sida haddii waxba ma dhicin.
Iyadoo Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) , aad awoodaan in ay gurmad iyo soo celiyo oo dhan jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, xiriirada fariimaha, qoraalka iyo Guda wac aan ka kaaftoomi kasta.
Talaabooyinka ku saabsan sida loo raad raac iyo soo celinta Motorola Moto X
In tutorial soo socda, waxaan kugu hagi doona tallaabooyinka fudud in ay si buuxda iyo 100% gurmad iyo soo celinta dhammaan xogta ku saabsan Motorola Moto X. tutorial wuxuu qaadanayaa version Windows sida tusaale. Haddii aad isticmaalayso computer Mac ah, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi version Mac iyo tixraac 'hago, sidoo.
Tallaabada 1. Connect Moto X in computer iyo ordi tababaraha Android
Si aan ku bilaabo, ordo manager- ee Android Wondershare MobileGo for Android kombiyuutarka. Connect aad Motorola Moto X in kombiyuutarka via cable USB ah ama ka weyn WiFi. Dadka isticmaala WiFi, waxaad u baahan tahay in ay ku rakibi MobileGo app qasban tahay inay leeyihiin on your Moto X, marka ay markii ugu horeysay si ay u isticmaalaan software this.
Ka dib markii la xidhiidha guul, tababaraha Android lagu ogaan doonaa Moto X goobtii. Markaas, oo dhan files faahfaahsan oo ku saabsan Moto X, sida laga daadiyo, music, xiriirada iyo SMS, waxaa lagu soo bandhigi doonaa galeeysid bidix.
Tallaabada 2. Chine ee kaabta, abuse wac, jadwalka taariikhda, xiriirada, SMS, iyo files warbaahinta on Moto X
Tag khadka hoose ee suuqa hoose, oo guji kaabta One-Click . Laga soo bilaabo suuqa kala gurmad, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha loo oggol yahay in la xoojiyaa. Uncheck aad files aan loo baahnayn oo guji Browse in ay doortaan waddo badbaadin si loo badbaadiyo file gurmad ah. Markaas, guji Back Up .
Habka gurmad ayaa aad qaadataa wakhti yar. Dhab ahaantii, waa ilaa mugga faylasha la xoojiyaa. Marka habka gurmad la soo gabagabeeyo, waxaad sidoo kale riixi kartaa Ok in la xiro suuqa kala gurmad ama guji Open Folder si loo hubiyo file gurmad ah.
Tallaabada 3. Soo Celinta aad Moto X
Dul galeeysid ka tegey oo guji Qalabka. Tag Tools aasaasiga ah iyo ku dhufo soo celi . Oo dhan files gurmad ku qoran yihiin. Mid aad rabto Dooro iyo guji soo celi .
Muuqaalada Key oo ku saabsan Tababaraha this Android
Iyadoo tababaraha Android, Motorola Moto gurmad x iyo dib u soo celinta soo baxday in ay si fudud, si degdeg ah oo ammaan ah. Dhab ahaantii, tababaraha this Android uu leeyahay kale qaababka badan oo muhiim ah.
Ku rakib, uninstall iyo dhoofinta barnaamijyadooda ku saabsan Moto X iyo sidoo kale arkaysid apps'detailed info;
Nuqul iyo gurmad loo doortay ama fariimaha qoraalka ah oo dhan ku Moto X, oo badbaadiyey sida XML ama file TXT;
Cid u dir oo uga soo Windows PC ama Mac jawaab SMS si aad saaxiibada;
Bedelka music, sawiro iyo videos on iyo aad Moto X;
Maamul xiriirada aad Moto X: daro ama wax ka bedel info buuxa, xiriirada dejinta ka VCF iyo qeybsanaan.
Hadda, download software in ay gurmad iyo soo celinta Moto X!
Sida loo hagaagsan Muuqaalka xiriir la Moto X
Sidee inay la midowdo qoruhu aan Loss Data in Windows 10?